Bulshaweynta Puntland oo ka hadlay Hoos u dhac ku yimid Sarifka Doolarka – SBC
Bulshaweynta Puntland oo ka hadlay Hoos u dhac ku yimid Sarifka Doolarka
Posted by Webmaster on November 4, 2011 Comments
Bulsha weynta ku dhaqan magaalooyinka waaweyn ee Dowlada Puntland ayaa ra’yigooda ka dhiibtay hoos u dhac ku yimid sarifka lacagaha dooralka xili ay ka qeybgaleen Barnaamijka Nasashada SBC oo Maalin walba oo jimce ah ka baxa Idaacada SBC INterntional.
Waxa ay badigood shegeen dadkaasi in ay siweyn uga cabanayaan sarifka Doolarka oo hoos u dhaca ku yimid iyo sicirkii caadiga ahaa ee ganacsiga waxyaabaha kala duwan oo halkiisii taagan.
Dadkani qaarkood waxay arimahan dusha u saariyeen ganacstada halka kuwo kalena ay sheegeen in ay ka dambeeyaan dad iyagu sii tashaday waasida ay hadalka u dhigeene.
waxay ugu baaqeen dhinacyada wax ka qaban kara arimahan sida dowlada in ay soo farageliyaan waxna ka qabtaan maadaama aan iskeeneyn sida ay dheheen, ganacsiga iyo sarifka lacagaha doolarka .
Magaalooyinka waaweyn ee Puntland sida Boosaaso, Qardho, iyo Garoowe ayaa mkaanta waxaa siweyn loogaga dareemay hoos u dhaca Doolarka iyadoona sida ay nooxaqiijiyeen dadka sarifa lacagahaasi uu doolarku marayo in ku siman 2melyan xoogaa.
Sikastaba ha ahaatee qaar ka Mid ah ganacsatada oo iyana la hadlay SBC international ayaa dhankooda sheegay in aysan wax lug ah ku laheyn arimahan ayna ku taagan yihiin sicirkii ay bagaashkooda markii hore ku sooqaateen.
maxamad Faroole says:
Dolarka iyo dhaqaalaha Somalia gaar ahaan waxaa ridey Sahal SerVice oo ay leedahay Shirkadda Golis iyo anigoo leh Warshadda Roodhiga ee Garowe